Malunga nathi - Xiamen Joint Tech Co., Ltd.
Eyona Ntengiso: Eunited States, Canada, Yurophu, Russia
Uhlobo lweShishini: I-ODM kunye ne-OEM
Inani labasebenzi: > 60
Ukuthengiswa konyaka: I-20M -30M i-USD
Unyaka oMiselweyo: 2015
Thumela pc: > 95%
Umboneleli weSisombululo sezaMandla eNtsha.
Indlela ebhetele yokwenza ixabiso！
Xiamen Joint Tech. Co., Ltd. yasekwa ngo-2015, nto leyo yesizwe High-Tech lweshishini kunye nobuchule obugqwesileyo be-R & D yokwenza isoftware kunye nezixhobo zeemveliso zamandla ezicacileyo, ezinje ngesitishi se-EV; Imveliso ye-LED, ukukhanya kwangaphandle kunye nokukhanya kwelanga.
Ngokudibeneyo kufunyenwe ngaphezulu kwama-60 amalungelo awodwa omenzi wechiza, kubandakanya ngaphezulu kwe-10 yamalungelo awodwa omenzi wechiza (ama-3 asuka e-United State). Ngenxa yokwamkelwa rhoqo kubathengi bethu behlabathi, siya kuhlala sizibophelela ekuhlanganiseni iikhonsepthi ezikhokelayo kunye neemfuno zesicelo esisekwe kumdlalo kunye nokuphuhlisa iinkalo zesahlulo ngakumbi.
Ukuba unazo naziphi na izimvo okanye izimvo malunga neemveliso zethu, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi. Sineentengiso ezingaphezu kwe-20 zobungcali kunye namava okubonelela ngeyona mveliso intle, inkonzo kunye nenkxaso.
Itekhnoloji ePhakamileyo yeSizwe
I-Fujian States Technology enkulu
IXiamen City Technology enkulu